छवि र शिल्पाको फेरि यत्रो काण्ड बाहिरियो: सगैँ बस्ने भए यति नाटक किन? पुरै पढ्नुहोस
September 21, 2019 by साहारा संदेश
केही महिना पहिले चर्चामा रहेको छवि–शिल्पाको काण्ड एउटा नयाँ मोडमा पुगेको छ । आफ्नै श्रीमान् छविविरुद्ध उजुरी गर्न प्रहरीमा पुगेकी अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल प्रहरीले खोजी गरेपछि फेरि छविसँगै बस्न थालेकी छिन् । उनीहरु दुवैजना सगँसँगै बस्ने कुरा बाहिरिएको छ । प्रहरीले बहुविवाहको उजुरीमा उनीहरु दुवैलाई खोजी रहेको थियो ।
शिल्पाले छविबाट असुरक्षित भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिए पछि विभिन्न किसिमका टिप्पणीसँगै उनीहरुले ठूलै चर्चा पाएका थिए । अभिनेत्री रेखा थापासँग सम्बन्धविच्छेदपछि छविले शिल्पासँग फेरि अर्को विवाह गरेका हुन् । २०७३ देखि वैवाहिक सम्बन्धमा बाधिएका शिल्पा छविकि चौथो श्रीमती हुन् ।
उनीहरुको विवाह दर्ता २०७५ साल पुष ११ गते भएको हो । छविले शिल्पालाई चलचित्र “लज्जा” बाट डेब्यू गराएका हुन् । छविकी पहिलो पत्नी हेमाले शिल्पा र छविलाई बहुविवाहको उजुरी दिएकी थिइन् । निर्माता छवि ओझाकी पहिलो पत्नी हेमा ओझा, दोश्री अभिनेत्री गीताञ्जली सुनुवार, तेश्री अभिनेत्री रेखा थापा र चौथि अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल हुन ।
विवाह गरेको केही समयपछि गीताञ्जलीले जीवनत्याग गरेकी थिइन् । छविकी पहिली पत्नीबाट दुई छोरा राजीव र महेश, दोस्रोबाट एक छोरा साकार छन् । साकार फिल्म क्षेत्रमै सक्रिय छन् । अभिनेत्री रेखा र शिल्पाबाट कुनै सन्तान भएको छैन । शिल्पाबाट पनि कुनै सन्तान भएको छैन । उनिहरु फेरि बस्न थालेको खबर यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोला ।
Prevचलचित्र छ माया छपक्कैको ट्रेलर आज सार्वजनिक भएको छ : हेर्नकालागी थिच्नुहोस
Nextविदेशि जिवन त्यागेर कृषि रोजेकै भरमा अहिले लखपती छन: छोटो समयमै यत्रो सफलताको कहानी अवस्य पढ्नुहोस